सुरक्षा गार्डलाई काम नगरी सुख छैन | Ujyaalo Online:: Nepal News, Nepali Samachaar
सुरक्षा गार्डलाई काम नगरी सुख छैन
चैत २७, २०७६ बिहिबार १६:४७:३३ | मेरो कथा मेरो भोगाई
मातृका चाम्लिङ, खोटाङ । हाल, मलेसिया ।
म मलेसियामा तीन वर्षदेखि कार्यरत छु । पहिले रमाई रमाई काम गरिन्थ्यो, अहिले डराई डराई काम गर्नु परेको छ । पहिले र अहिलेमा काम गराई पनि फरक छ । पहिले रहर सपना पूरा गर्नु थियो, तर अहिले ज्यान जोगाउनु छ । परदेशी भूमीमा कहाँ मान्छ र मन ? तर बाध्यता छ ।
सोच त आफ्नो देशमै केही गर्ने थियो । काम नखोजेको पनि होइन । धेरै भौतारिएँ, तर हात पाखुरा बजार्ने मेलो नमिलेपछि आफ्नो घर परिवार चलाउन परदेश आएको हुँ । तर आज यो कोरोनाले के ग¥यो ग¥यो । महिनामा तलब पाएको छैन । सबै बजारहरु बन्द छन् ।
अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर निस्कन पनि पाईंदैन । मलेसिया सरकारले कडा नियम बनाएको छ । कतिपय साथीहरु कोठामै बसिरहेका छन् । काम छैन कम्पनीमा ।
बाहिर निस्कंदा प्रहरीले भेट्यो भने जेल सजाय हुन्छ । त्यसैले पनि ननिस्कौं भन्छु म सबैलाई । कतिपय साथीलाई त खान बस्नको पनि समस्या छ ।
म चाहिँ यहाँ सुरक्षा गार्डको काम गर्ने भएकाले जोखिम मोलेरै काम गर्नुपर्छ । मन बलियो बनाएर काममा निस्कन्छु । तर मन डर त कति लाग्छ लाग्छ नि । कहिलेकाहीँ त यतै मरिन्छ कि झैं लाग्छ । उता घरबाट बुवाआमाले खाने खर्च छैन पठाइदेउ भनिरहनुभएको छ । यहाँ सबै बैंक बन्द छ कसरी पठाउनु ?
परदेशमा अवस्था सामान्य हुँदा त दुःख थियो । गाह्रो थियो । अहिले त मनै कमजोर, ज्यानै कमजोर भएको छ । यस्तो बेला लाग्छ, देशमै रोजगारी पाएको भए आज यो आपतका बेला आफ्नो दुःख अरुलाई सुनाउने दिन आउने थिएन । म मेरै परिवारको साथमा हुने थिएँ ।
हामीले यतिका वर्ष रेमिट्यान्स पठाएर देशलाई सहयोग ग¥यौं । सरकार अब देशमै केही गर्ने वातावरण बनाउ । म नेपालमै केही गर्न चाहन्छु । मेरो गाउँठाउँमा बुवाआमाको काखमा बस्ने रहर छ । रहरले होइन घरको छाक छ.टार्न बिदेसिएको हुँ । सरकार अब त हामीलाई स्वदेश फर्काउ ।
अन्तिम अपडेट: कात्तिक ५, २०७७
टाटा एच फाइभ गाडी बुकिङमा अफर , साढे ३ लाखसम्म नगद छुट
बर्दिवास प्रकरण : हत्या गरिएकी बालिका र प्रहरीकाे गाेली लागेर...
नेपालगञ्जबाट रुकुम आउँदै गरेको बस सल्यानमा दुर्घटना, ६ जना घ...
सन्दीप लामिछाने काेराेनामुक्त, भन्छन्– मैदानमा उत्रिन हतारिएका...
कांग्रेस नेता पौडेल ३ घण्टापछि रिहा, 'त्याे घटनाकाे जति विरा...
मन्त्रालयले त 'ट्वाक्क–ट्वाक्क' बाेल्नुपर्‍याे नि !, कुन चाहिँ कु...
जापानले आफ्नाे देशमा बस्ने सबैलाई काेराेनाकाे खाेप निःशुल्क ...
सरकारकाे अधिनायकवादी अभीष्ट पूरा हुन नदिने देउवाकाे चेतावनी
‘हात जोडेर तपाईँ त्यो ठाउँमा नगइदिनुस् भन्दा पनि रामचन्द्र पौड...
नवीनतम उद्यम गर्न चाहनेले दुई प्रतिशत ब्याजमा ५० लाख रुपैयाँस...
सगरमाथा क्षेत्रको सरसफाइका लागि फोहरकै सङ्ग्रहालय
२४ घण्टामा १ हजार ४९० जनामा काेराेना सङ्क्रमण, १५ सयभन्दा धेर...
बुधबार नेप्से झण्डै ७१ अङ्कले बढ्याे
लुम्बिनी प्रदेश राजधानीको लागि देउखुरीमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु
किम जाेङले चीनले बनाएकाे काेराेना खाेप लगाएकाे अमेरिकी विज्ञकाे दाबी
बुझेर आउनुहोस्, खाडीमै पनि सम्भावना प्रशस्त छन्